Repoblika Demôkratikan' i Kôngô ((mg))
Ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô dia firenena ao Afrika Afovoany. Izy no firenena ao Afrika ngeza indrindra eo aorian' i Sodàna sy i Aljeria; izy koa no firenena ngeza indrindra sy be mponina indrindra ao Afrika Afovoany. Iantsoana azy koa ny hoe Kôngô-Kinshasa mba tsy hifangaroany amin' i Kôngô-Brazzaville. I Kinshasa no renivohiny, avy eo no niavian' ilay anarana hoe Kôngô-Kinshasa. I Zaira koa no anaran' io firenena io tamin' ny 1971 hatramin' i 1997, teo izy niova Repoblika Demôkratikan' i Kôngô. Ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô no firenena be mponina indrindra ao amin' ny fikambanan' ny firenena miteny frantsay eo alohan' i Frantsa.
Sarin-tanin' ny Repoblika Demokratikan' i Kôngô
1.1.2 Fiitaran' ny fanjakà-mpanjaka
3.2 Ny loharanon-karena voa-janahary
3.3 Ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono
3.3.1 Ny fambolena
3.3.2 Ny fiompiana sy ny jono
3.4 Harena an-kibon' ny tany sy indostria
3.4.1 Harena an-kibon' ny tany
3.5 Ny fifanakalozana anatiny sy ny fitaterana ary ny varotra ivelany
3.5.1 Ny fifanakalozana anatiny
3.5.2 Ny fitaterana
3.5.3 Varotra ivelany
4.1 Ny fivavahana
4.2 Ny fiteny
Nisy ny fanjakà-mpanjaka niorina koa teo anelanelan' ireo taonjato voalohany taor. J.K. sy ny taonjato faha-15, ka ny lehibe indrindra amin' ireo dia ny fanjakan' i Loba (Luba) sy ny fanjakan' i Londa (Lunda) ary ny fanjakan' i Kôngô (Kongo). Tamin’ ny taona 1482 dia nifandray voalohany tamin’ ny fanjakà-mpanjaka banto tao Kôngô (Kongo) ny Pôrtogey.
Fiitaran' ny fanjakà-mpanjakaHanova
Ny faharavan' ny Empira LondaHanova
Fahazoan' i Stanley fahefana feno tao CongoHanova
Ny fanjanahan-tany belzaHanova
Ny Fanjakana Mahaleotenan' i CongoHanova
Lasa fananan' i BelzikaHanova
Tamin’ ny taona 1955, raha nitombo ny fitakiana fahaleovana nataon’ ny Association des Bakongos (Abako) naorin’ i Joseph Kasa-Vubu dimy taona tany aloha, sy ny Conscience africaine izay naorina tamin’ ny taona 1951, dia nivoy ny amin’ ny atao hoe “Fianakaviambe belgô-kôngôley” (Communauté belgo-congolaise) i Baudouin I. Nandroso paikady hanomanana olomanga kôngôley amin’ ny asan’ ny fanaovan-draharaham-panjakana ny governemanta belza.
Tsy fifanarahan' ny mpitaky fahaleovan-tenaHanova
Taorian’ ny fandrarana ny fivorian’ ny Association des Bakongos dia nisy fihetsiketsehana nipoaka tao Léopoldville tamin’ ny volana Janoary 1959, nanambara ny hanaovana fifidianana an-toerana ny governemanta belza. Nitombo ny tsy fitovian-kevitra teo amin’ ireo fikambanana ara-pôlitika, ka ny sasany, toa ny Mouvement national congolais (MNC) notarihin’ i Patrice Lumumba, dia nankasitraka ny hisian’ ny lalàm-panorenana mandala ny fanjakana federaly, ny hafa kosa, toa ny Association des Bakongos (Abako) izay notarihin’ i Joseph Kasa-Vubu sy ny Confédération des associations katangaises (Conakat) dia nitaky ny hananganana fanjakana kônfederaly.
Ny fitondran' i KasavubuHanova
I Kasavubu no filoham-pirenenaHanova
Tamin’ ny volana Mey 1960, ny fifidianana, izay nahazoan’ ny MNC tarihin’ i Patrice Lumumba fandresena, dia nanome ny toeran’ ny filoham-pirena an’ i Joseph Kasa-Vubu, taorian’ ny fanambaràna ny fahaleovan-tena tao Léopoldville tamin’ ny 30 Jona 1960. Nihamaro ny herisetra, ary nikomy ny tafika kôngôley. Mba hamerenana ny filaminana sy hiarovana ireo Eorôpeana nitoetra tao Kôngô dia nanatevina ny tafika belza ny andian-tafika avy any Belzika. Neritreretin’ ny mponina ho fiverenan’ ny mpanjana-tany indray izany.
Ny fisaraham-bazan' i KatangaHanova
Nitombo ny korontana rehefa nanambara ny fahaleovan-tenan’ ny faritanin’ i Katanga i Moïse Tshombé izay notohanan’ ny Union minière ka nangataka ny fanampian’ ny miaramila belza, tamin’ ny 11 Jolay 1960. Namaly ny antson’ ny piraiminisitra Patrice Lumumba ny Filankevi-pilaminana (Conseil de sécurité) ao amin’ ny Firenena Mikambana ka nitaky ny hialan’ ny Belza sady nanapa-kevitra handefa ny Satro-manga (tafiky ny Firenena Mikambana) mba hamerina ny filaminana ao Kôngô. Nisolo miandalana ny tafika belza ny tafiky ny Firenena Mikambana nefa tsy niditra an-tsehatra mivantana. Noho izany dia nitodi-doha tany amin’ ny Firaisana Sôvietika i Patrice Lumumba.
Ny nahafatesan' i Patrice LumumbaHanova
Tamin’ ny 5 Septambra 1960 dia nanambara ny fanesorany an’ i Patrice Lumumba tsy ho piraiminisitra ny filoha Joseph Kasa-Vubu. Tamin’ io fotoana io ihany koa no nanonganan’ i Patrice Lumumba an’ i Joseph Kasa-Vubu. Ny tafika kôngôley notarihin’ i Mobutu Sese Seko, izay mpomba an’ i Joseph Kasa-Vubu, no naka ny governemanta. Tamin’ ny 29 Septambra 1960 dia namindra ny fahefany tamin’ ny governemanta vonjimaika notarihin’ i Mobutu Sese Seko i Joseph Kasa-Vubu. Nosamborina sy nogadraina i Patrice Lumumba, avy eo novonoina tamin’ ny 17 Janoary 1961, tany amin’ ny faritanin’ i Katanga.
Fitsaharan' ny fisaraham-bazan' i KatangaHanova
Tamin’ ny volana Janoary 1961 dia nanangana governemanta vonjimaika vaovao i Joseph Kasa-Vubu, ka nisy mpikambana avy ao amin’ ny Antenimiera taloha izany (isan’ izay i Joseph Ileo izay notendrena ho piraiminisitra). Ireo mpomba an’ i Patrice Lumumba kosa dia nanao toraka izany tany Léopoldville (ka i Gisega no piraiminisitra). Tamin’ ny faran’ ny taona 1961 dia namely ny tafik’ i Tshombé ny tafiky ny Firenena Mikambana sy ny tafika kôngôley. Nanao fifampiraharahana hampitsaharana ny ady eo amin’ ny tafika misatro-manga sy ny tafika katangey i Dag Hammarskjöld sekretera jeneralin’ ny Firenena Mikambana. Tamin’ ny Desambra 1962 dia voafehin’ ny tafiky ny Firenena Mikambana i Elisabethville. Nandositra tany Kolwezi i Tshombé. Nitolo-batana izy tamin’ ny 15 Janoary 1963 ary nahazo famelan-keloka miaraka amin’ ireo namany.
Fitohizan' ny fiokoan' ireo mpomba an' i LumumbaHanova
Ny fitondran' i Mobutu Sese SekoHanova
Fanonganana an' i Kasavubu sy fitondrana jadon' i MobutuHanova
Taorian’ ny tsy fahombiazan’ ny governementa iraisana dia nandray ny fitondrana i Mobutu Sese Seko tamin’ ny faran’ ny taona 1965, rehefa avy nanongana an’ i Kasa-Vubu, ka nanambara ny tenany ho filohan’ ny Repoblika. Tamin’ ny taona 1966 dia nanangana governemanta jadona, izay ananan’ ny filoham-pirenena fahefana betsaka, izy sady antoko tokana no nekeny hisy, dia ny Mouvement populaire de la révolution (MPR). Izany fitondrana izany dia nohamafisiny tamin’ ny fampadaniana lalàm-panorenana vaovao tamin’ ny taona 1967.
Nanamafy ny maha filoha azy tamin' ny fifidianana i MobutuHanova
I Mobutu Sese Seko sy i Richard Nixon tamin' ny taona 1973
Fitontogan' ny toekarena sy pôlitikan’ ny fitsitsianaHanova
Fihozongozonan' ny fitondran' i MobutuHanova
Ny olana nateraky ny adin’ ny Hoto sy ny TotsyHanova
Fidarabohan’ ny fitondrana tao KisanganiHanova
Ny fitondran’ i Laurent-Désiré KabilaHanova
Fanonganam-panjakana sy ampihi-mambaHanova
Tompon’ antoka tamin’ ny fandripahana ny HotoHanova
Fikomian’ ny Totsy baniamolengeHanova
Fanirahana ny MONUC hiantoka ny fampitsaharana ny adyHanova
Ny fitondran’ i Joseph KabilaHanova
Fiakaran’ i Joseph Kabila teo amin’ ny fitondranaHanova
I Joseph Kabila sy i John Kerry tamin' ny taona 2013.
Fifanarahana hitondrana ny firenenaHanova
Fitohizan’ ny ady an-trano tany amin’ ny faritra atsinananaHanova
Fahalanian’ i Joseph Kabila voalohanyHanova
Fahalanian’ i Joseph Kabila fanindroanyHanova
Ny fitondran’ i Félix TshisekediHanova
Ny tany sy ny zavaboary ao aminyHanova
Ny vohon' ny tany sy ny ranoHanova
Ny renirano Oubangui, ao akaikin' i Bangui
Ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô dia manana velaran-tany mirefy 2 344 885 km². Ao anaty lempona midadasika no misy azy dia ny lemaky ny ony Congo izay nahazoany io anaray io. Ny rano indray dia harena voa-janahary lehibe ho an’ ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô, izay manana otri-kerin’ aratra avy amin’ny rano lehibe indrindra maneran-tany.
Ny tangorom-bohitra Ruwenzori
Ny Repoblika Demôkrartikan’i Kôngô dia vakivakian' ny fehiben-tany ka noho izany dia ny toetanim-pehibe izay sady mafana no mando mandavan-taona no manjaka ao, nefa misy fahasamihafana kely izany arakaraka ny fehin-tany sy ny haambo (haavo miohatra amin' ny ranomasina). Ny faritra afovoany dia be orana mandavan-taona, manodidina ny 26 °C ny maripana. Ao avaratra sy ao atsimo dia ifandimbiasan’ny fizaran-taonan’ny orana (maharitra valo volana eo ho eo) sy ny fizaran-taona maina (maharitra efa-bolana eo ho eo). Ao amin’ny tangoron-tendrombohitr’ i Ruwenzori ary indraindray ao amin’ ireo afotroa Virunga dia betsaka ny orampanala milatsaka satria mivoatra manaraka ny haambo ny zavamaniry sy ny toetany.
Ireo havoanan’ i Kivu ao atsinanana, izay tany misolampy tohin' ny tangoron-tendrombohitra an-dranomasin’i Congo-Nil, dia matetika rakotra ahi-maitso ary ny nofon-taniny avy amin’ny afotroa dia lonaka ka mety amin’ny fambolena. Any ambanimbany any dia hitana alam-pehibe midadasika sy mikitroka izay mandrakotra ireo faritra atsinanana sy avaratra-atsinanana. Ny ala midadasik' i Ituri dia mivelatra avy any amin’ ny fihaonan’ i Congo sy i Aruwimi ao amin’ ny farihy Albert sady mandrakotra veleran-tany manakaiky ny 65 000 km². Izany ala izany no faritra farany onenan’ ireo Pigmea. Maro ireo karazan-kazo ahazoana fingotra sy ireo palmie fanamboara-menaka izay volen’ny mponina ao amin’ io faritra io, hita ao koa ny kafe sy ny hasy (na landihazo), ny akondro ary ny voaniho. Rakotry ny fatraa ireo faritra avo indrindra manamorona ny lemak' i Congo.
Biby sy voronaHanova
Betsaka ny karazam-biby sy vorona. Ao ireo karazam-biby atahorana ho lany tamingana toy ny gorilin-tendrombohitra ao amin’ ireo Virunga, ny elefanta, ary koa ireo biby mampinono lehibe toy ny liona, ny leôparda, ny jirafa, ny lalomena, ny ôkapy, ny zebra ary ny bofalô. Ny biby mandady sy mikisaka koa dia hita ao, isan’ izany ny bibilava pitôna, ny voay. Hita ao koa ny vorona samihafa toy ny boloky, ny sama, ny karazan-takatra. Ny toetany mando dia mampitombo isa ny bibikely, ka anisan’ izany ny moka anôfela izay mitondra ny kantsentsitry ny tazomoka, ny lalitra tsetse miaina eny amin’ ny tany lemaka izay mamindra ny aretin’ ny torimaso.
Ny mponina sy ny fiarahamoninaHanova
Ny vondrom-poko sy fokoHanova
Ny mponina ao amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô dia nahatratra any amin’ ny 68 008 922 tamin’ ny taona 2008, izay manana salan-kakitroka 30 mp/km². Izany isa izany dia manakaiky ny 86 000 000 ankehitriny. Ny toerana tena be mponina dia ao amin’ ny faritra fitrandrahana harena an-kibon’ ny tany ao Shaba sy ao amin’ny Bas-Congo. Latsaky ny ampahatelon’ ny mponina no monina an-tanàn-dehibe. Tamin’ ny taona 2008 dia 42,50 ‰ ny taham-pahaterahana, ary ny taham-pahafatesan’ ny zaza dia 64 ‰ ary ny salam-pahela velona dia 57,6 taona. Nahatratra 107 tapitrisa ny isan' ny mponina tamin' ny taona 2021.
Tsy ampy ny fandaminana momba ny fitsaboana. Nihanaka izaitsizy ny ny sida. Tamin’ ny volana Avrily 1995 dia nisy valan’ aretin-tazo mahavery ra vokatry ny virosy Ebola (avy amin’ ny anaran’ ny renirano Ebola; izay akainkin’ ny tanàna nahitana voalohany ilay aretina tamin’ ny taona 1976) izay namono olona mihoatra ny 160 tao amin’ ny faritr’ i Kikwit ao atsinanan’ i Kinshasa.
Ny loharanon-karena voa-janaharyHanova
Ahitana harena an-kibon' ny tany be dia be ny ao Maniema sy ao Kivu ary ao Katanga, indrindra ny varahina, ny oranioma, ny volamena ary ny diamondra.
Ny tobim-pamokarana herin' aratra amin’ ny rano izay notokanana tamin’ ny taona 1972 ao Inga, ao an’ iràn’ i Kinshasa ao amin’ ny ony Congo no lehibe indrindra maneran-tany, nefa ny ampahany be amin’ ny tanjaky ny tohadranon’ i Inga dia tsy ampiasaina.
Ny hazo sarobidy sy ny hazo fanaovam-panaka sy fanorenana (teka, ebena, sederan’ i Afrika, ny akazoa, sns) dia misy betsaka. Ny alam-pehitany dia mandralotra ny 6 %n’ ny velaran-tany misy ala maneran-tany sy saika ny antsasaky ny velaran-tany misy ala aty Afrika, nefa izay ala izany dia athorana ho ripaky ny tavy. Tamin’ ny taona 2006 dia any amin’ ny 75 800 000 m³ ny famokarana hazo, indrindra ny hazo fandrahoana satria sarotra dia sarotra ny fitaterana ny hazo any amin’ ny morontsiraka.
Ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jonoHanova
Ny fiompiana sy ny jonoHanova
Harena an-kibon' ny tany sy indostriaHanova
Harena an-kibon' ny tanyHanova
Ny 15 %n’ ny mponina afaka miasa dia miasa amin’ ny sehatry ny harena an-kibon' ny tany sy ny indostria, izay miantoka ny 27,7 %n’ ny PIB tamin’ ny taona 2006. Ny harena an-kibon’ ny tany indrindra no herena lehibe ao amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô, izay mihazona ny antsasaky ny tahirin-kôbalta maneran-tany sady isan’ ireo manana tahirim-barahina lehibe indrindra maneran-tany. Ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô koa taloha no firenena laharana voalohany amin’ ny fanondranana kôbalta maneran-tany (6 100 tônina tamin’ ny taona 1996), izy koa taloha no laharana faharoa amin’ ny famokarana diamondra (20 000 000 karà tamin’ ny taona 1991). Ny varahina no vokatra mampidi-bola be indrindra isan’ olona amin’ izy ireo. Mitrandraka firapotsy volamena, volafotsy, fanitso, manganezy, tongstena ary kadmioma koa ny Repoblika Demôkratikan’i Kôngô. Ny otri-tsolitany an-dranomasina dia trandrahina nanomboka tamin’ny taona 1975. Ny tohodranon’ i Inga eo amin’ ny onin’ i Congo no lehibe indrindra aty Afrika.
Ny fifanakalozana anatiny sy ny fitaterana ary ny varotra ivelanyHanova
Ny fifanakalozana anatinyHanova
Ny teny frantsay no teny ôfisialin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô. Misy fiteny tompon-tany miisa 220 ny ao amin’ io firenena io ka ny ankamaroan’ ireo dia fiteny banto, nefa ny efatra no natao fitenim-pirenena ifaneraseran’ ny mponina, dia ny fiteny soahily, ny fiteny lingala, ny fiteny kikôngô ary ny fiteny tsiloba.
Tantaran' ny firenena afrikana:
Afrika Atsimo - Alzeria - Angôla - Benino - Borkina Fasô - Borondy - Bôtsoana - Ejipta - Eritrea - Esoatiny (Soazilandy taloha) - Etiôpia - Gabôna - Gambia - Ganà - Ginea - Ginea Bisao - Ginea Ekoatôrialy - Jibotỳ - Kamerona - Kapvera - Kenia - Kômôro - Kôtidivoara - Lezôtô - Liberia - Libia - Madagasikara - Malaoy - Malỳ - Maorisy - Maoritania - Marôka - Môzambika - Namibia - Nizera - Nizeria - Oganda - Repoblika Arabo Saharaoy Demôkratika - Repoblika Demôkratikan' i Kôngô - Repoblikan' i Afrika Afovoany - Repoblikan' i Kôngô - Roanda - Saô Tôme e Prinsipe - Seisely - Senegaly - Siera Leôna - Sodàna - Sodàna Atsimo - Sômalia - Sômalilandy - Tanzania - Tôgô - Tonizia - Tsady - Zambia - Zimbaboe
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Repoblika_Demôkratikan%27_i_Kôngô&oldid=1040821"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 15:26
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:26 ity pejy ity.